नेपाली राजनीतिमा दाहालका अनेक छलाङ, फेरि छलाङको तयारी ! (भिडियो) | ImageKhabar <!-instant articles-->
नेपाली राजनीतिमा दाहालका अनेक छलाङ, फेरि छलाङको तयारी ! (भिडियो)
काठमाडौं, जेठ २६ । नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कतिले अस्थिर त कतिले चतुर राजनीतिक खेलाडीका रुपमा लिने गर्छन् । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेर राजनीतिको शिखरमा उभिएका दाहालको चर्चा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि उस्तै छ ।
आफुले गरेका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुलाई ‘छलाङ’ भन्ने गरेका दाहालले गरेका निर्णयहरु विवादित र प्रत्यूत्पादक पनि बन्ने गरेका छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ सालमा पहिलो पटक दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, केही महिनाभित्रै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि अर्को राजनीतिक छलाङ मार्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको नारा दिएर सडक आन्दोलनमा होमिए । सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिएका दाहालले २०६७ सालमा एमालेभित्र खेलेर तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी सोही पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भए ।
उक्त राजनीतिक घटनालाई दाहालले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि आफ्नो राजनीतिक छलाङ मान्दै आएका छन् । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा आफु नेतृत्वको नेकपा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चेपछि पनि दाहालले आफ्नो राजनीतिक छलाङलाई निरन्तरता दिन रोकेनन् ।
चुनावपछि सत्ता सहयात्री बनेका कांग्रेस र एमालेको समीकरण संविधान जारी भएसँगै टुट्यो । संविधान जारी नहुन्जेल प्रतिपक्ष रहेका दाहालले दुई ठुला दलको समीकरण टुटेसँगै कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास थाले । तर उक्त प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा हुने विश्वासमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने भूमिमा उनी देखिए ।
२०७२ सालको यो घटनालाई पनि दाहालले राजनीतिक छलाङको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर, सरकार गठन भएको केही महिनाभित्रै अर्थात २०७३ साल वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहालबीच असहमति देखा पर्‍यो । लगत्तै उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कार्ड फाल्न थाले ।
बजेटपछि दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा उक्त असमझदारी केही दिनसम्म थामथुम भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता छोड्न मानेनन् । सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनले आफ्नै पार्टी सहभागी सरकारले पास गरेको आर्थिक विधेयक असफल पार्दै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरे ।
अभूतपूर्व छलाङ मार्दै दाहाल ८ वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका दाहालले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे । कांग्रेससँगको सहमति अनुसार पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । तर, देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही समयभित्रै उनी पुनः राजनीतिक छलाङको गृहकार्यमा लागेको देखियो ।
सत्ता सहयात्री दलसँगको गठबन्धनलाई तोड्दै प्रदेश र संघको चुनावमा गठबन्धन गर्ने र त्यसपछि एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्न दाहाल सफल भए । दाहालकै शब्दमा यो पनि राजनीतिक छलाङ नै थियो ।
तत्कालिन एमाले र माओवादीको गठबन्धनले चुनावमा अपेक्षाककृत परिणाम ल्यायो र पूर्वसहमति अनुसार २०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो । दाहालले यो घटनालाई आफ्नो राजनीतिक छलाङकै निरन्तरता भनेका छन् ।
चुनावमा झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त नेकपाले अहिले मुलुकको शासनसत्ता चलाइरहेको छ । र, यसको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । तर, ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ महिना पुरा हुनै लाग्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले एकीकरणको बेला भएको ५ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा रहेको सत्ता हस्तान्तरणको विषय उठाएका छन् । उक्त सहमतिबारे पार्टीभित्रैबाट फरक–फरक धारणा आइरहेका छन् ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक–पटक छलाङ मार्दै आएका दाहालले दुई पार्टी एकताका बेला भएको सत्ता हस्तान्तरणको सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि कस्तो छलाङ मार्लान्, चासोको विषय बनेको छ ।